Sekuyisikhathi eside imidlalo IBhodi won uthando ngezwe. Izigigaba ukuthola indlela engcono ukudlula kusihlwa e inkampani enkulu, futhi ngesikhathi esifanayo ukuchitha isikhathi. Naphezu kokwanda ebanzi ikhompyutha lokuzijabulisa, imidlalo isilinganiso ibhodi zihlanganisa inqwaba imikhiqizo ethandwa, phakathi umuntu angahlangabezana bazikhethele efaneleka kakhulu. Ngakho-ke, yokuchitha isizungu ezinjalo kuba esasebenza nanamuhla.
I ezikhangayo etafuleni imidlalo
imidlalo ibhodi ukuthandwa ngempela elungisisiwe ngoba ukuze udlale nabo, kungekho imali eyengeziwe. Okudingekayo - isethi eziyisisekelo izinto ezithile, bese nina nihlela ukuba kube kusihlwa okujabulisayo lonke inkampani.
Ngaphezu kwalokho, iqoqo ibhodi mdlalo mobile kakhulu - kungathatha ukuze izivakashi on uhambo, ngisho amatende. Lo mdlalo kuzosiza diversify ukuphumula futhi uzobe ngomdlandla yamukelwe iyiphi inkampani.
Futhi, lokho kuzijabulisa kokuhle enhle kuwo wonke umuntu. Bona zingahlanganiswa njengelungu beminyaka yobudala efanayo, futhi ezahlukene, ngakho kulungele enkampanini enkulu ngezindlela eziningi, futhi ukungcebeleka umndeni.
Usezingeni etafuleni imidlalo kuhlanganisa eziningi ongakhetha ezahlukene, phakathi okuyinto wonke umuntu uzokwazi ukuze ucoshe okuthile ngendlela esilindele yakho.
Kungani abantu kudingeka ukuzijabulisa okunjalo?
IBhodi imidlalo - umsebenzi ewusizo kakhulu. Phela, nabo basuke zihloselwe kudlule isikhathi sokungcebeleka hhayi kuphela. Zishukumisa emcabangweni izinto izingane kanye nabantu abadala, enze ukuqeqeshwa umsebenzi kwezemfundo.
Kufeza indima ebalulekile kanye nokuthuthukiswa emakhonweni. Ukuxhumana kanye nekhono ukwakha ubudlelwano team - omunye amakhono ayisisekelo, kwakhiwa ibhodi imidlalo.
Lo mdlalo ethandwa kakhulu emhlabeni
Uma sikhuluma engcono ibhodi imidlalo zomhlaba, simo sabo kunqunywa ngokuyinhloko ukutholakala okuqonda (kufanele bakuqonde eyehlukene), kanye ukuhlobana kanye jikelele.
Phakathi yokuzijabulisa anezithunywa udumo emhlabeni wonke, yilezi:
ezikhangayo eziphezulu imindeni kanye nezinkampani
Isilinganiselwa izinkampani kanye imikhaya iye yadweba imidlalo fun, engeke nje ukuletha ndawonye ababambiqhaza nomunye, kodwa futhi ukunikeza ithuba ncintisana erudition yakhe, bathole ulwazi olusha futhi umane mnandi futhi ukuchitha isikhathi.
Classic ibhodi fun
Loku kufaka chess bendabuko, Checkers, Backgammon, Domino namaphazili imidlalo ikhadi. Baziwa iminyaka engaphezu kwekhulu futhi ngokufanelekile anesikhundla ehamba phambili, sokunquma imidlalo isilinganiso ebhodini. ukuzijabulisa okunjalo ihlukaniswa njengoba ohlakaniphile, ngesikhathi esifanayo ube okuthakazelisayo futhi asathuthuka. I ethile kuphela yale midlalo wukuthi kungukuthi eyenzelwe enkampanini enkulu (ngaphandle kwekhadi, okungase kuhileleke abantu engaphezu kwemibili).
"Monopoly" - Classic uhlobo, kwaphela iminyaka eminingi ephethwe sohlelo imidlalo ibhodi enkampanini. Mhlawumbe omunye imigomo yezomnotho edume kakhulu emhlabeni wonke. Ingqikithi Its lowo nalowo obambe iqhaza uthola capital ekuqaleni-up, okuyinto idinga wokuba ande, ngaleyo ndlela baphelelwe nabaphikisi. ERussia, umdlalo njengoba nenkathi yamaSoviet eyaziwa futhi sandile njengengelosi ekuthuthukiseni fun okuthakazelisayo engqondo enkampanini enkulu.
"Scrabble" - omunye omdala futhi ethandwa kakhulu umdlalo webhodi, futhi usesikhundleni okuholela namuhla. essence yayo itholakala iqiniso ukuthi bonke ababambe iqhaza ekhishwe ngezincwadi eziyisikhombisa, abekwa emkhakheni, esakhiwa 225 izikwele (15 x 15). Owinile nguye uzokwenza yisibalo esikhulu sabasebenzi esingakaze amagama omude kunayo yonke.
"Scrabble" - umdlalo erudition. Awukwazi ukusebenzisa isichazamazwi noma ezinye nezinsiza.
"Twister" kungenzeka neze ukwenza emidlalweni isilinganiso etafuleni, kuba kunalokho a "phansi", kodwa kwakuqala ukwanda okukhulu. Lo mdlalo kudinga umthwalo kancane kwengqondo - ke uyasebenza futhi yakhelwe eguquguqukayo kanye dexterity. Injongo eyinhloko abahlanganyeli - ukuba alondoloze ngeqholo, gcina bangawi le pad umdlalo.
Lo mdlalo okuthakazelisayo kungokwalabo uhlobo isu. Uyini kumnandi? Abahlanganyeli bamakoloni 'watshala' ku esiqhingini desert, lapho kufanele ukwakha isiphetho, ukuthuthukisa futhi amaphuzu amaphuzu iningi. Umdlali ngubani izikolo amaphuzu 10 zokuqala.
ongakhetha Omunye yokuchitha isizungu izinkampani ezinkulu, sibonga ngalo ziyahlukahluka yiliphi iqembu. Lokhu kumnandi futhi wenze umncintiswano uyakufanelekela nezinye izinto abakha isilinganiso wonke umndeni ibhodi imidlalo.
Lokhu ikhithi kuhlanganisa inkambu nokudlala, chips namakhadi ne imiqondo noma imishwana ukuthi kudingeka ukuba kuchazwe.
"Ticket ukuze Ride"
Lo mdlalo eziyojatshulelwa abathandi kwakudala futhi olandelanayo inkathi zothando. Umgomo oyinhloko - ukwakha esiteshini futhi kwi-trailer (umdlali ngayine inezidingo zayo bakhe) ukuba zisuke edolobheni laseYurophu kwenye. Kuyadingeka ukuvimbela abanye abadlali ukuze unqobe umzila futhi sifinyelele umgomo.
logic TOP imidlalo ibhodi
Imidlalo logic luthathe indawo ekhethekile phakathi kwezinye ibhodi ukuzijabulisa. Bona ukuphoqa ukuba smash ikhanda lakhe ukuxazulula izinkinga eziyinkimbinkimbi nokuthuthukisa ukucabanga okunengqondo. Omunye ukuzijabulisa ethandwa kakhulu tibalwe lapha ngentasi.
Arsenal "USeti" - amakhadi ngemifanekiso ku sawo safaka amagama weJiyomethri, okuyinto ifanele ihlanganiswe ngezizathu ezifanayo. Ulwazi wezibalo iyasiza umdlalo!
Umgomo oyinhloko umdlalo - by permutations okunengqondo umkhiphe kusukela chips enkundleni yemidlalo abaphikisi. Owinile nguye kuqala odlulela yisibalo esikhulu sabasebenzi esingakaze chips.
Izinzuzo imidlalo ibhodi izingane
Imidlalo yamabhodi izingane - ewusizo kakhulu futhi zisebenza kahle ithuluzi ukuthuthukiswa ukucabanga. Zishukumisa umcabango yezingane, kufake sandla ukuphikelela, funda ukwenza izenzo ngokuhambisana nemithetho ethile kuphela. fun enjalo kabanzi hhayi kuphela njengoba sokuzijabulisa kodwa nangesidingo zezemfundo - njengoba ithuluzi yokufunda ngempumelelo.
Ngaphezu kwalokho, lezi imidlalo ukuthuthukisa umqondo wengane umyalo, ukunakwa ukucabanga okunengqondo.
imidlalo ibhodi Top Izingane
Usezingeni etafuleni imidlalo izingane ezikhonjwe Ezokuzijabulisa, elihlanganisa izici eziningana. Lokhu ukukhanya, injabulo kanye okusuka.
Ribbit ( «Turtle Run")
A Umdlalo elula futhi umlutha ukuthi kuyoba mnandi kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Iphuzu eliyinhloko ukuthi izibalo ezincane emibalabala izimfudu babe sitini ngesitini ukusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Kulokhu, ayikho abadlali awazi ukuthi ubani futhi hlobo luni bug fanele.
"Munchkin. Letha ngcebo "
okufushane Wezingane yomdlalo omdala "Munchkin" ngemithetho lula, ingashintshwa ukuze yobudala omncane.
Lapha, njengoba kule nguqulo omdala, ungakwazi ukulawula izilo, zikhona cubes, kanye nezinye izimfanelo, kanye kule "ubhuti". Injongo eyinhloko yawo ingane "Munchkin" - ukuze azitike ngangokunokwenzeka ingcebo futhi babe umdlali acebile.
Lo mdlalo ungase ngokufanelekile faka TOP "The best ebhodini imidlalo zomhlaba." Usezingeni ke phakathi ukuzijabulisa zezingane yalolu hlobo impela high. An umdlalo okuthakazelisayo futhi ezithakazelisayo, okuyinto kungenziwa labizwa ngokuthi umndeni. Ngesikhathi lo mdlalo udinga azokuqhubela "ipulazi" - ukutshala imbewu, sikhule izitshalo, ukondla izilwane futhi athengise izimpahla wathola emakethe. Enqoba lowo uzokwazi ukukhulisa izilwane wanelisekile kakhulu futhi bondlekile.
Enye inguqulo ye kumnandi omdala yezingane, ingxenye yezwe simo imidlalo ebhodini. Lena ukuzijabulisa okuhle zentuthuko ezokwenza ivumelane hhayi kuphela Juniors, kodwa futhi kulabo nje ufuna ukufunda ukudlala kule omdala "Carcassonne."
Izihloko - inkathi Ephakathi. Lapha udinga ukwakha izinqaba, hamba ukuzingela, ukudoba kanye iqhaza izimpi knightly.
Ukuthuthukisa "Alias" umdlalo noma "Ngitshele kunjalo," - ekhangayo bokusungula umdlalo, asihambisani kahle enkampanini enkulu. essence yayo - beveza nomqondo likasoseshini bese ukuqagela abazama ukuhlonza abadlali nezinye amaqembu.
Game Silulumagama ulimi lwendabuko, kanye ikhuthaza ekutadisheni olunye ulimi.
Inhloso yaleli umdlalo ezithakazelisayo - ukwakha zoo. Kuyinto efanelekayo omncane abadlali abaneminyaka ephakathi kwengu-6 futhi ngeke nje nesithakazelo abasha omdala abahlanganyeli, kodwa futhi enze umsebenzi kwezemfundo jikelele - usizo ukufunda entsha, zinhlobo engaziwa kwezilwane. Lokhu kumnandi ngokufanelekile babekwazi ukungena hhayi kuphela kule simo imidlalo ibhodi zezingane, kodwa futhi ukuthatha isikhundla okuholela TOP ideskithophu ukuzijabulisa abadala.
Puzzle Imidlalo izingane
Puzzle fun efomini bezijabulisa ukufundisa izingane ukuba acabange kusukela eminyakeni bokuqala.
Usezingeni the best ebhodini imidlalo ukuthuthukisa intelligence zezingane ingezansi.
Lokhu okuthakazelisayo ithebula umdlalo kunomthelela ukuthuthukiswa ukucabanga okunengqondo wengane futhi likuvumela ukufunda okuningi ukuphila kwezilwane zasendle. Lo mdlalo kuzokwenza kube mnandi izingane ezineminyaka engu-6.
Lilula, futhi ngesikhathi esifanayo umdlalo okuthakazelisayo on ukuthuthukiswa logic, eyenzelwe izingane ezineminyaka engu-8. Injongo eyinhloko abahlanganyeli - ukuqoqa izinto kuboniswe amakhadi, ngezizathu eziningana. Qeqesha inkumbulo yakho kanye nekhono ngekhanda esiningi ulwazi ngesikhathi.
Futhi lo mdlalo logic yasungulwa abahlanganyeli abasha kakhulu abaseminyakeni yobudala ephakathi kwengu engu-3. Njengoba i Analogue we "Tetris" owaziwa, kuyasiza ukuthuthukisa inkumbulo, Wit kanye motor amakhono yezandla.
umdlalo yezengqondo nge chips ezimibalabala abadlali encane. umklamo Bright ngokuqinisekile ukunambitha izingane, futhi elula futhi kujabulise ngesikhathi esifanayo ivame ukuba ukhuthaze ukuthuthukiswa ukucabanga okunengqondo futhi bezibona futhi ezibukwayo, efana hhayi kuphela izingane kodwa abazali babo.
Indlela ukupheka ikhukhamba anosawoti ukudla okusheshayo